Saxenda - နောက်ဆုံးပေါ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေး။ - ဘရာဇီး ဖြည့်စွက်စာ
မတ်လ 5, 2018 ဇန်နဝါရီလ 11, 2022
ဒါပေမယ့် Saxenda တကယ်အလုပ်ဖြစ်လား။
Quitoplan ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ။
စာဖတ်ချိန်-5မိနစ်
မကြာသေးမီက ANVISA မှထုတ်ဝေသည် Saxenda အဝလွန်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်မယ့်လက်နက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်သလဲ။ သို့သော်လည်းဘရာဇီးနိုင်ငံတွင်ထိုဆေးကိုလူသိမများသေးပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အပလီကေးရှင်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ်၌မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်အဘယ်ကြောင့်အခြားအစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းသောအမျိုးအစားများနှင့်ကွဲပြားသောဤလမ်းညွှန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသည်။
GLP1 သည် အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့ကျစေပြီး အစာအိမ်မှ အစာကြေအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်မှ ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစာ ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ်နှေးကွေးသောနည်းဖြင့် ဤအချက်ဖြင့်၊ LPG သည် အစာအိမ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို နှေးကွေးစေပြီး ဤအစာချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို တက်ကြွမှုနည်းပါးစေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ Saxenda သည် GLP1 ဟုခေါ်သော ဤဒြပ်စင်ကိုထုတ်လုပ်ပြီး အစာအိမ်သို့ရောက်ရှိကာ အစာချေဖျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှေးကွေးစေခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အဲဒါနဲ့ ရလဒ်တွေ ကွမ်းခြံကုန်း အောင်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ BMI ကျဆင်းခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာများကို လျှော့ချပေးသည်။ သို့သော်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်လူအုပ်စုအတွက် Saxenda ကို အကြံပြုထားကြောင်း မှတ်သားထိုက်ပါသည်။
Saxenda သည် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။ ဝိတ်ကျ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှိ အခြားဆေးဝါးများထက် အနည်းငယ်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းရှိပြီး ဆေးဆိုင်များကြားတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက ဘရာဇီးသို့ရောက်ရှိလာသော ဆေးဝါးအသစ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆေးဆိုင်သေးသေးလေးများတွင် မတွေ့ရပါ။
လျင်မြန်သောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုတစ်ခုတွင်၎င်းကိုအွန်လိုင်းမှရောင်းချသောဆေးဆိုင်နှစ်ခု၌၎င်းထုတ်ကုန်ကို Onofre နှင့်Araújoတို့ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်သည်သူတို့တစ် ဦး စီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ သင့်မြို့အတွက်စျေးနှုန်းနှင့်ပို့ဆောင်ခကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
အမှန်အားဖြင့်မည်သူမဆို Saxenda ကိုသုံးနိုင်သည်။ တကယ်ဖြစ်ပျက်တာကတော့ဒီဆေးကလူတိုင်းအတွက်မသင့်တော်ပါဘူး။ အမှန်မှာ Saxenda ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်သတ်မှတ်သောဆရာဝန်များသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လက္ခဏာများအတိုင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။
>>> ဖတ်ရန် Como perder gordura ဝမ်းဗိုက်
သို့သော် Saxenda ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီအရမူးယစ်ဆေးဝါးသည်ပိုမိုသင့်တော်သောအုပ်စုနှစ်စုရှိသည်။
အဝလွန်ခြင်း - သို့သော် အဝလွန်ခြင်းကိုသာ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဆီ အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် အပိုတာယာသေးသေးလေးများ။ လူတစ်ယောက်ကို အဝလွန်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ရန်အတွက်၊ 30 နှင့် ညီမျှသော သို့မဟုတ် ကြီးသော BMI ပမာဏကို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤရလဒ်ဖြင့် လူတစ်ဦးတွင် 30 ရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် အဆီကီလိုဂရမ်သည် လူအများစုတွင် ၂၃ဝ ဝန်းကျင်ရှိသော စံနမူနာထက် အဆမတန်ပိုများကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်နာတာရှည်ပြဿနာများသည်ပိုလျှံသောအဆီကြောင့်ဖြစ်ရသည် - ဤအုပ်စုကို Body Mass Index ၂၇ နှင့်အထက်ရှိခြင်းအားဖြင့်အဓိကဖော်ထုတ်သည်။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်လူများသည် BMI မြင့်မားခြင်းမရှိသဖြင့် Saxenda အားထောက်ခံချက်ရနိုင်ပါသေးသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ခန္ဓာကိုယ်၌အဆီပိုများသောလူနာများအတွက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများရှိနိုင်သည်။ အဓိကပြသနာအမျိုးအစားများမှာသွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား ၂၊ အိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှူရပ်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရောမြင့်ခြင်းစသည်
Saxenda နှင့် ကြီးမားသော ကွာခြားချက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်မှ အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေသည်။ အစာစားချင်စိတ်ကို ဖယ်ထုတ်မယ့်အစား၊ အစာ လုပ်ထားတာကြောင့် အချိန်ကြာကြာ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ လူသည် အစာစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် စူပါဆေးပမာဏကို သောက်သုံးရန် စိတ်ဝင်စားပါက၊ ၎င်းတို့ မျှော်လင့်ထားသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိရန် ပထမဆုံး အစားအစာ လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
ဤခြားနားချက်သည်သေးငယ်သော်လည်း ANVISA မှဖြန့်ချိမည့် Saxenda ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤအစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေခြင်းသည် anorexia ဖြစ်ပွားမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးအစွန်းရောက်ဆုံးအခြေအနေများတွင်ပင်အစာစားခြင်းကိုအားပေးသည်။
>>> ဖတ်ရန် ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျဖို့ အကြံပြုချက် ၅ ခု။
ထို့အပြင်၊ ဆေးဝါးအများစုနှင့်မတူဘဲ၊ Saxenda ကို ဆေးပြားပုံစံဖြင့် မရောင်းချပါ။ မှန်ကန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရှိရန် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် သို့မဟုတ် သူနာပြုတစ်ဦး၏ နောက်ဆက်တွဲ လိုအပ်သည့် ဆေးထိုးရန် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် လူသည် အလွန်အကျွံသောက်ရန် ခက်ခဲလာပြီး လူသည် ဆေးသောက်လျှင်ပင် ထိရောက်သော သက်ရောက်မှု ရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ.
ဟုတ်သည်။ အစာစားချင်စိတ်ကိုတားဆီးပေးနိုင်ပြီးအစာချေဖျက်မှုကိုနှေးကွေးစေသောအစွမ်းသည်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ၁၀% ကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သေးပုံရသော်လည်း ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသောလူတစ် ဦး အတွက် ၉၀ ကီလိုဂရမ်သို့ကျဆင်းခြင်းသည်သင်၏ BMI ကို ၂ သို့မဟုတ် ၃ ဂဏန်းများသို့ကျဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သို့သော်၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကျင့်များနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင် Saxenda ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိမှသာရနိုင်သည်ဟုပြောရကျိုးနပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအာဟာရနှင့်ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေးများဖြစ်နေသေးပြီး Saxenda နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် 10% ဆုံးရှုံးသွားပါက ခန္ဓာကိုယ်အဆီ 10% ထက်ပို၍ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ မှာ အဆီဆုံးရှုံးသည် ကြွက်သားတည်ဆောက်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းငယ် လျော့ကျသွားပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ဖြစ်နိုင်ပြီး တကယ့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါအတွက်၊ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ရှင်းပြပြီး Saxenda ကို သူတို့အတွက် တံတားတစ်စင်းဖြစ်စေမယ့် ဆရာဝန်နောက်ဆက်တွဲကို လိုအပ်တယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်လိုအပ်သည်မှာ Saxenda ၌တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်း၏အမည်သည် liraglutide ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဤအမည်အောက်တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ Saxenda သည် Novo Nordisk S/A ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအမည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဤဆေးဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရခဲ့ဖူးသူများ၏အစီရင်ခံစာများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ Saxenda ကိုယူချင်။ သံသယရှိနေသေးလျှင် Facebook အုပ်စုများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းကအခြားသူတွေနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းသိချင်တာ၊ မေးခွန်းတွေမေးနိုင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာစတာတွေကိုကြည့်နိုင်တယ်။
>>> ဖတ်ရန် Pro Hormonal Thor - R2 သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း
Saxenda သည်အလွန်ကောင်းသောဆေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများစွာ၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်ပြဿနာမှာဆေးညွှန်းဖြင့်သာရောင်းချသောကြောင့်လူများစွာသည်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်အခက်အခဲရှိနေသေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးစာလိုအပ်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောကုထုံးများကိုအခြားတစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုသည် ကွမ်းခြံကုန်း။ ကတစ် ဖြည့်စွက် ဝယ်ယူရန်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်ဘဲ Anvisa မှလုံးဝအသိအမှတ်ပြုထားသောလုံးဝသဘာဝဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၎င်း၏ရလဒ်များကြောင့် အဝလွန်နေသူများကြားတွင် အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် သင့်အား ကူညီပေးသည့်အပြင် အာဟာရပညာရှင်မှ တီထွင်ထားသည့် အစားအစာအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် ပိန်ပိန်ဆေးတောင့်များ၏ စွမ်းအားကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန် မင်းကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဝလာ. တစ်နည်းဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစာမငတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့် အစားအသောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်း ပြောနေပါသည်။
ဤနေရာကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ရှုပါ။ ဖြည့်စွက် အစာစားချင်စိတ်ကို တားမြစ်သူများ
မင်း QuitoPlan ကမင်းရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့အတွက်အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုငါတို့စာရင်းပြုစုထားတယ်။
လုပ်ပါ။ အူမကြီး ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်
QuitoPlan ကို သင်ဝယ်ယူလိုပါက၊ ၎င်းကို ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော https://www.suplementosmaisbaratos.com.br/ မှတစ်ဆင့် ရောင်းချသောကြောင့် သင့်အိမ်မှ ထွက်ခွာစရာမလိုဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်သည် လုံးဝလုံခြုံပြီး သင့်ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် ဘဏ်စလစ်ဖြင့် သင့်ဝယ်ယူမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ခရက်ဒစ်ကတ်တွင် ၎င်းကိုပင် ခွဲနိုင်သည်။